Ity toetrany ity dia iray amin'ireo ankizy be mpitia indrindra, ary amin'ny olon-dehibe koa. Ny hockey an-dalam-pandehanana an-habakabaka ho an'ny ankizy dia natao ho an'ny lalao roa sy ekipa. Ary ireo izay tonga mpankafy marina amin'ity lalao ity, dia mahazo baolina amin'ny famokarana an-tsambo ho an'ny ankizy.
Ny hockey an-dakozian'ny ankizy ao an-dakilasy - fombafomba mifidy
Raha manapa-kevitra ny hividy takelaka gaming ianao, dia zava-dehibe ny mahafantatra ireo fitsipika fototra izay misy vokany mivantana. Ny fepetra manan-danja indrindra dia ny kalitaon'ny latabatra sy ny lanjany. Tokony ho tohina mafy izany, indrindra amin'ny rafitra fanamainana ny tany sy ny drainage.
Ny hockey elektrikan'ny fiaramanidina elektrônika, izay hitanao ao amin'ny foibem-pialam-boly, dia afaka manana fanovana maromaro. Ireo dia latabatra lehibe misy hazavana mamirapiratra sy feo mahomby. Ao amin'ny kitapo dia misy marika, ary io rafitra io dia manome rafitra momba ny tenany ary io dia masinina matotra.
Safidy lafo kokoa, hockey an'ny ankizy amin'ny lalao ekipa. Ao amin'io latabatra io dia misy lalao ho an'ny olona roa. Saingy misy ihany koa ireo modely tsotra, izay mety tsara amin'ny fampiasana trano.
Azo zaraina ho sokajy efatra avokoa izy ireo.
Hetsi-panoheran'ny ankizy ho an'ny trano. Ny dikan-teny mora sy sarotra. Izy io dia manome lozam-barotra mekanika, feno amin'ny bits sy mpanisa. Ity latabatra ity dia mety ho an'ny fialamboly mandritra ny andro sisa.
Ny hockey an-dabozon'ny lamaody, izay ampiasaina amim-pahombiazana ho fialamboly ao an-trano, ary ho an'ny tanjona ara-barotra. Efa misy solaitrabe eo amin'ny tadin-doha, feon-kira, ary ny haben'ny latabatra dia lehibe kokoa. Ho an'ny tranobe fividianana lehibe toy izany dia tsy mety ny modely, fa ho an'ny efitranon'ny ankizy na trano fisakafoanana kely ihany - tena.
Air hockey ho an'ny ankizy, izay mampifangaro lalao samihafa atsy ho atsy. Afaka miditra ao amin'ny latabatry ny gorodona, misy mody lafo kokoa izay azo ovaina ho tabilao tennis, poker, roulette. Ny sasany dia misy fanaka fisakafoanana. Matetika ny modely mitovy amin'ny hockey Air Hockey amin'ny ankizy, miasa ao amin'ny tambajotra, dia novidina ho trano ivelan'ny tanàna ary nampiasaina ho foibem-pialam-boly.
Ny hockey an-dàlam-pihetseham-pon'ny ankizy ho an'ny sehatra ara-barotra dia an'ny sokajy lafo indrindra Izy ireo dia latabatra lehibe misy tabataba sy feo mahavarimbona isan-karazany, afaka mametraka azy ireo ao an-trano sy any ivelany.
Izany toe-tsaina izany dia mety ho lasa tia anao ao an-tranonao. Manatsara ny fandrindrana ny hetsika, ny fihetsiketsehana ary ny lojika . Ity dia fomba tsara hanangonana ny fianakaviana manontolo ao anatin'ny andro iray ho an'ny takariva mahafinaritra.
Ny moto an'ny ankizy amin'ny solika
Ireo horonantsary ankizy ho an'ny zazavavy 5 taona
Ankizivavy kely amin'ny trano fonenana
Box box boxhouse
Asa fanabeazana ara-batana
Fitsipika momba ny lalao ao amin'ny "Scrabble"
Sakafo 10 voarara ho an'ny zaza
Mofo misy siramamy
Hazo kofehy amin'ny tanany manokana
Ririnina ao amin'ny sofina havia - famantarana
Fitondran'ny ankizy ao anatin'ny iray volana
Ny toetra mampiavaka ny doberman Doberman
Ampioks - analogues
Zavatra izay hahatonga ny fialam-boly ho mahafinaritra kokoa
Maty tampoka ilay mpilalao Michael Galeotte
Decis Pro - torolàlana ampiasaina
Vato moron - toetra mahagaga
Ahoana raha nendahana ny goaika iray?
10 no eny amin'ny planeta, izay fandrosoana ara-teknika no nodiavin'ilay antoko
Kim Kardashian, Chrissie Tagen ary kintana hafa nandrotsaka ronono tao amin'ny clip vaovao Fergie